Milicsiga Waxyeelladii Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland! Qaybta 2aad - Somaliland Post
Home Maqaallo Milicsiga Waxyeelladii Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland! Qaybta 2aad
Milicsiga Waxyeelladii Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland! Qaybta 2aad
Wakiil Farxaan Aadan Haybe iyo kooxdiisu waxa ay si xooggan u ilaaliyeen ogaalka qofka la siiyay dhulka madaarka ee hudheelka dhisaya. “Nin reer Hargeysa/Sallaxley ah oo Ismaaciil la yidhaahdo ayaa dhisanaya” ayaa lagu majara-habaabiyay dad badan. Ismaaciil waa ayo? Halkee ayuu ku nool yahay? Ma cir-ka-soo dhac aan la aqoonsan karin baa?. Jawaabtaas oo aan maalmo door ah hayay, kuma qancin 100%. Timir laf baa ku jirta, maxaa weedhaas ku dahsoon! Haddii xisaabta qaybinta sarreeyaha laga dhigo eber maxaa soo baxa? Bal 0/9, 0/8 sheeg natiijadeeda. Afka Ingiriisiga waxa la yidhaahdaa “Undefined” “Wax aan qeexnayn” weeye.
Hiirtii Khamiista 6dii Julaay 2017ka ayaan u jarmaaday si aan xog sugan uga helo dadka la-deriska ah madaarka ee dhulkooda dadka kale loo gacan-geliyay, waxaanay farta iigu fiiqeen cidda qandaraaska boolida ah lagu naas-nuujiyay. “Waxa dhisanaya Ganacsade caan ku ahaa waayadan boobka hantida guud. Agaasimaha Guud waxa uu noo sheegay in aanu dhisku ka soo tallaabi doonin xadkii taarka. Haddii uu hal taako dibadda u soo fido” mooyi. Cid maal-gelinta samaysayba waa qandaraas naas-nuujin ah oo loo tartamin. Falkani waxa uu xoojinayaa dhaqannadii uu hore KULMIYE ugu sadheeyay ummadda Somaliland ee kala-xigtaysiga, jufaynta iyo qaraaba-kiilka ahaa.
Dhulka loo qoondeeyay albeerkadu waxa uu ku dhaw yahay lix baloog. Waa meel ay degi lahaayeen 60 qoys. Waa dhul laga qaaday lix qoys oo kala duwan, waxaana lo ballan-qaaday in dhul beddel loogu samaynayo sida ugu dhakhsaha badan. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa yidhi “Waxa aanu u tagnay Wasiir Farxaan xilliyadii hawsha la bilaabayay. Isaguna waxa uu noo sheegay in aanu la xidhiidhno Agaasimaha Guud. Waayo waxba kama ogeyn hawshan oo waxa shaxda sii dhigay Wasiirka Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi”
Iyada oo lagu tagri-falay dhulkii dadka laga qaaday ayaa haddana xayiraad la saaray hulka Madaarka la-deriska ah. Dadweynaha leh dhulka la-deriska ah Madaarka oo iiga xog-warramay dhibta ka haysata maamulka dhulkooda ayaa yidhi “Waxa xayiraad la saaray beeraha ku dhow madaarka Hargeysa, taasina waxa ay sababtay in aanu awood u yeelan weyno iibka, kirada, hibeynta iyo maamulidda hantida aanu leennahay.
“Waxa aanu xayiraadda dhulkiinna saaran qaadi doonnaa marka aad ku deeqdaan lix boqol oo mitir oo jihada koonfureed ka xiga madaarka” ayaa dhawaan lagu wargeliyay dadkii hore loo bara-kiciyay. Aragtidani waxa ay saamaynaysaa illaa 15 beerood oo hore dhul looga qaaday. Iyada oo aan dhul-beddel hore loo samaynnin dadkii 400 mitir laga kiciyay ayaa haddana lagu taamayaa 600 mitir oo kale. Markaasna wax dadka u soo hadhayaa ma jiraan. Inta woqooyigii gegada laga dhigay hudheel, dhinacii barina laga dhisay dhagax-shiid ayaa markii dhulku yaraaday haddana la rabaa in xaggii koonfureed loo kaco. Waa haddii laga yeelo xukuumaddeenna Murdiso!